တောင်ကြီးခရိုင် ဥပဒေရုံး၊ မြို့နယ်ဥပဒေရုံးနှင့် အရာထမ်းအိမ်ရာ အဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ(၉)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက တောင်ကြီးမြို့အထွက်(၂)မိုင် ကံကြီးရပ်ကွက်ရှိ တောင်ကြီး−ဟိုပုံးသွား ကားလမ်းဘေး၌ ကျင်းပကြောင်းသိရ သည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေရုံးတောင်ကြီးခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတို့သည် ကိုယ်ပိုင်ရုံး မရှိသည့်အတွက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ အဆောက်အဦ၌ ရုံးခန်းများဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို သိရှိရပါကြောင်း၊ အဆောက်အဦတစ်ခုတည်းတွင် ရုံး(၃)ရုံးစုပေါင်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နေရ၍ နေရာမလုံလောက်သဖြင့် လုပ်ငန်းအဆင်မပြေမှု များရှိခြင်းကြောင့် ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်ဥပဒေရုံး မြေနေရာခွင့်ပြုရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက တင်ပြခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇွန်လ(၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၇) တွင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဧရိယာ(၀.၆၈၀)ဧကရှိ ယခုမြေနေရာကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါကြောင်း၊ တောင်ကြီးမြို့ တွင်ဥပဒေရုံးများအတွက် ပထမဦးဆုံး မြေနေရာချထားပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါ၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း ဝမ်းမြောက် မိပါကြောင်း၊ အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရန် ဘတ်ဂျက်တောင်းခံသဖြင့် ၂၀၁၈−၂၀၁၉ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ရုံးအဆောက်အဦနှင့် (၃)ခန်းတွဲ RC (၁)ထပ်၊ အရာထမ်းအိမ်ရာအတွက် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုခဲ့ပါကြောင်း၊ တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုလိုအဆောက်အဦသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလိုဖြည့်တင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်နှင့်အညီ ဥပဒေရုံးများကလည်း တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍတွင်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင်လည်း ဥပဒေနှင့်အညီကောင်းမွန်သော အကြံဉာဏ် များပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အထောက်အကူပြုကြရန် ပြောကြားသွားသည်။
ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိဦးဇော်ဇော်ထွေးက အဆောက်အဦနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ရှမ်းချယ်ရီ တောင်တန်းကုမ္ပဏီ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးစိုးလင်းက အဆောက်အဦနှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတန်းများကို ပြည်နယ် အရာရှိဦးဇော်ဇော်ထွေးထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကာ တောင်ကြီးခရိုင် ဥပဒေရုံးနှင့် တောင်ကြီးမြို့နယ် ဥပဒေရုံးသစ်အဆောက်အဦ ကိုပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးတင်ဦး တို့မှဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေး၍ ရုံးဆိုင်းဘုတ်အား စက်ခလုပ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးကာ ဆိုင်းဘုတ်ကမ္မည်းမော်ကွန်းကို အမွှေးနံ့သာ ပက်ဖြန်းပေးကြပြီး အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဟိုပုံးမြို့တွင် ခရိုင်ဥပဒေရုံးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်၍ အသီးသီးအမှာစကား ပြောကြားကြပြီး ရုံးဆိုင်းဘုတ်ဖွင့်ပွဲကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်စံလွင်တို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေး၍ ဆိုင်းဘုတ်ကမ္မည်းမော်ကွန်းကို အမွှေးနံ့သာပက်ဖြန်းပေးကြကာ ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ အဆောက်အဦနှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတန်းများကို ပြည်နယ် အရာရှိဦးဇော်ဇော်ထွေးထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကာ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရသည်။
ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အိပ်ချ်အိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသွားသူများကို အမှတ်ရစေရန် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရှိသူများအပါအဝင် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက နိုးကြားတက်ကြွသောစိတ်ဓါတ်များနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအဖြစ်မှ လုံးဝကင်းစင်ပပျောက်သွားသည်အထိ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် များဖြင့် ၂၀၁၉ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို ဒီဇင်ဘာ(၁)ရက် နံနက်(၉)နာရီ ကတောင်ကြီးမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ကမ္ဘာခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက် ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့် “Communities make the difference” “အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ ကင်းဝေးရေးလူထု အားလုံးပါဝင်ပေး” နှင့်အညီ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကူးစက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် သက်တူရွယ်တူ ကျန်းမာစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ၊ ကွန်ယက်အဖွဲ့များ၊ ဦးတည်အုပ်စုဝင်များ၊ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်၊ လူထုကျန်းမာရေးလုပ်သား များ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအစရှိသော လူထုအားလုံးပါဝင်ပြီး လူတိုင်း အတွက် စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီသော အရည်အသွေးမီ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိခံစားစေရန်နှင့် အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကူးစက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ကုသရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာသူဇာချစ်တင်က အမျိုးသားခုခံကျ/ ကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ ပြည်နယ်ခုခံကျ/ကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမင်းယုအောင်က ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)အတွင်းဆောင်ရွက် ခဲ့သော ခုခံကျကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်လုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းတင်ပြကာ ခန်းမအပြင်ဘက်တွင် ပြသထား သောပြခန်းများကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများအား ရှင်းလင်းလိုက်လံ ပြသကြည့်ရှုကြကြောင်း သိရရှိသည်။
တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ − ၈
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးဓာတ်အားသုံးစွဲသူ(၅၀%)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ(၈)ရက် နံနက်(၉)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ Treasure Palace Hotel ၌ကျင်းပသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် အစိုးရသစ်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံတော်၏အခြေခံအဆောက်အဦ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖြစ်သည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နှင့်လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရန်ပုံငွေဖြင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားတိုးတက်၊ ထုတ်လုပ်၊ ပို့လွှတ်၊ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးကာလတို ကာလရှည်စီမံချက်များချမှတ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၆−၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကျပ်သန်း(၁၈၆၆၈.၇၅၁)ကျပ်၊ ၂၀၁၇−၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်းကျပ်သန်း(၂၁၁၂၃.၃၇၇)ကျပ်၊ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ (၆)လပတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကျပ်သန်း(၁၈၀၀၆.၁၈၃)ကျပ်၊ ၂၀၁၈− ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကျပ်သန်း(၂၂၈၈၈.၁၁၃)ကျပ်၊ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကျပ်သန်း(၃၆၁၀၀)ကျပ်၊ ၂၀၁၆−၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ပြည်ထောင်စုငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းကျပ်သန်း(၂၉၇၀၀.၄၉၈)ကျပ်အသုံးပြု၍ ပြည်သူများလျှပ်စစ်မီးဗို့အား ပြည့်မှီစွာသုံးစွဲနိုင်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ရေးအစရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် တွင်(၂၃၀)ကေဗွီဓာတ်အားခွဲရုံ(၂)ရုံ၊ (၁၃၂)ကေဗွီဓာတ်အားခွဲရုံ(၄)ရုံ၊ (၆၆)ကေဗွီဓာတ်အားခွဲရုံ(၄၈)ရုံ၊ (၃၃)ကေဗွီဓာတ်အားခွဲရုံ (၁၅၉)ရုံ၊ (၁၁)ကေဗွီဓာတ်အားခွဲရုံ(၄၆၅၅)ရုံ၊ (၂၃၀)ကေဗွီမဟာဓာတ်အားလိုင်း(၁၄၈)မိုင်၊ (၁၃၂)ကေဗွီမဟာဓာတ်အားလိုင်း (၂၁၆.၇၀)မိုင်၊ (၆၆)ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်း(၇၈၉.၇၃)မိုင်၊ (၃၃)ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်း(၇၄၈.၆၅)မိုင်၊ (၁၁)ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်း (၂၃၄၇)မိုင်၊ (၄၀၀)ဗို့ဓာတ်အားလိုင်း(၂၄၄၆.၀၉)မိုင်တို့ဖြင့် မြို့များအပြင် ကျေးရွာ(၁၈၆၆)ရွာ၊ မီးသုံးစွဲသူ(၄၂၃၉၃၀)ဦးနှင့် အိမ်ထောင်စု(၅၁၇၀၅၇)ဦးတို့အား နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးထားရှိပြီး ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုပမာဏမှာ (၂၈၆.၆)မဂ္ဂါဝပ် သုံးစွဲလျက်ရှိပါကြောင်း၊ မီးလင်းရန်ကျန်ရှိသည့် မြို့နယ်ကျေးရွာများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးမြှင့်ရရှိရေး အတွက်ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်များဖြင့် လျာထားဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုလိုတစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူ(၅၀%)အထိ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းအောင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားကို ပိုမိုဖြန့်ဖြူးပေးသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း)၊ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာမှူးများ ဖြစ်ကြသော ဦးကျော်လှိုင်ဝင်း၊ ဦးသိန်းထွန်း၊ ဦးသက်ပိုင်မျိုးတို့မှ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့အားအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့တွင် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ဒီဇင်ဘာဒုတိယအကြိမ် လူထု လမ်းလျှောက်ခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ(၇)ရက် နံနက်(၆)နာရီက ပြည်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံရှေ့၌ကျင်းပရာ လမ်းလျှောက်ပွဲ ကိုကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်က တာလွှတ်ပေးသည်။
ဆက်လက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဆရာဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ဒေသခံပြည်သူများက ပြည်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံရှေ့မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီး စူဋ္ဌာမုနိလောကချမ်းသာစေတီတော်ရင်ပြင်တွင် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းအတွဲ(၁) အတွဲ(၂)ပြုလုပ် ကြပြီး ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် လူထုလမ်းလျှောက်ပွဲဒုတိယအကြိမ်တွင် စုစုပေါင်းအင်အား(၃၀၀၀၀)ကျော်ခန့် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြကြောင်းသိရသည်။
ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ဒီဇင်ဘာလူထုလမ်းလျှောက်ပွဲကျင်းပ
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့တွင် နိုဝင်ဘာ(၃၀)ရက် နံနက်(၆)နာရီက ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည် တစ်ခွင်ဒီဇင်ဘာလူထုလမ်းလျှောက်ပွဲကို ပြည်နယ်လေ့ကျင့်ရေးရုံအားကစားကွင်းရှေ့၌ကျင်းပရာ လမ်းလျှောက်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အားကစားတာလွှတ်သေနတ်ဖြင့် ပစ်ဖောက်တာလွှတ်ပေးခဲ့သည်။
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့်ဇနီးဒေါ်နန်းရွှေမြင့်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ ဒေသခံပြည်သူများက ပြည်နယ်အားကစားလေ့ကျင့်ရေးရုံ ရှေ့မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်ပြီး စူဠာမုနိလောကချမ်းသာစေတီတော်ရင်ပြင်တွင် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း အတွဲ(၁)၊ အတွဲ(၂) ပြုလုပ်ကြပြီး လမ်းလျှောက်ကြသည့် ပြည်သူများနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ပြည်နယ်အားကစား နှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ စက်ဘီး၊ ထမင်းပေါင်းအိုး၊ စတီးချိုင့်၊ ဓါတ်ဗူးတို့ကို ကံစမ်းမဲလက်မှတ် ဖောက်ပေးကြောင်းနှင့် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် လူထုလမ်းလျှောက်ပွဲ ပထမအပတ်၌ စုစုပေါင်းအင်အား (၃)သောင်းကျော် ပါဝင်ဆင်နွှဲ ကြကြောင်းသိရရှိသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နောင်ချိုမြို့နယ်တွင် ဒီဇင်ဘာ(၄)ရက် နံနက်(၉)နာရီက နောင်ချိုမြို့နယ် အားကစားကွင်း၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဓနုအမျိုးသားနေ့ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားတွင် ကြိုဆိုပါတယ်ဓနုမြေ သီချင်းဖြင့်ကပြဖျော်ဖြေ၍ သဝဏ်လွှာများဖတ်ကြားကြပြီး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်က အမှာစကားပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ဓနုလူမျိုးတို့သည် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် မြန်မာပြည်မကြီးအကြား ဒေသများတွင်အများဆုံးနေထိုင်ပြီး၊ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိမြို့များ၊ ကျောက်နီတွင်းဒေသ၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မိုးကုတ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိမိုးမိတ်၊ ကျောက်မဲ၊ သီပေါ၊ နောင်ချို၊ ရပ်စောက်၊ ပင်းတယ၊ ပွေးလှ၊ ရွာငံ၊ အောင်ပန်း၊ ပင်မှီ၊ ဘော်နင်း၊ သာမိုင်းခမ်း၊ ကလော၊ တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေ၊ ဟဲ ဟိုး၊ လုံးပိုး၊ တီကျစ်၊ ပင်လောင်းမှစ၍ ပျဉ်းမနားအရှေ့ဘက် ပေါင်းလောင်းမြစ်ရိုးတစ်လျှောက်အထိ ရှည်လျားသော ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့် အနောက်ဘက် တောင်တန်းကြားကွင်းပြင်များ၌ အနှံ့အပြားနေထိုင်လျှက်ရှိကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရပြီး၊ ၂၀၁၂ခု နှစ်သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သည့် လူမျိုးမှတ်တမ်းတွင် နေထိုင်မှု အများဆုံး ရှမ်း၊ ဒုတိယ ပအိုဝ်း၊ တတိယ ဗမာ၊ စတုတ္ထ ဓနုဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအနက် ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် လူဦးရေအများဆုံး အမှတ်စဉ်(၁၀)တွင်တည်ရှိသဖြင့် လူမျိုးကြီးစားရင်းတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရှေးဘိုးဘွားဘီဘင် လက်ထက်ကတည်းက နေထိုင်သည့် မူရင်းဒေသဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေရှိသည့် လူမျိုးဖြစ်ပြီး၊ နီးစပ်ရာလူမျိုးတို့၏ ဘာသာစကား မဟုတ်ဘဲကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားရှိသည့် ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းရှိ လူမျိုးဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိပါကြောင်း၊ ဓနုအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကို ဓနုတိုင်းရင်းသားပျံ့နှံ့နေထိုင်သည့်မြို့များတွင် အလှည့်ကျကျင်းပ၍ ပထမအကြိမ် ရွာငံမြို့တွင်ကျင်းပပြီး၊ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ယနေ့နောင်ချိုမြို့နယ်တွင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဓနုတိုင်းရင်းသားများကိုယ်စား ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းပြောကြားသွားသည်။
ထို့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ လှူဒါန်းသောအလှူငွေကျပ်သိန်း(၅၀)ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပေးအပ်ရာတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှလက်ခံရယူ၍ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပြန်လည်ပေးအပ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
တောကျယ်ကျေးရွာ ရေပြာအိုင်အဝင်လမ်း ကတ္တရာလမ်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ရွာငံ နိုဝင်ဘာ - ၃၀
ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ရွာငံမြို့နယ် မြင်းကျဒိုးကျေးရွာအုပ်စု တောကျယ်ကျေးရွာ ရေပြာအိုင်အဝင်လမ်း (၁)မိုင် (၁)ဖာလုံ ကတ္တရာလမ်းဖွင့်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ(၂၉)ရက် နံနက်(၉)နာရီက အဆိုပါနေရာ၌ ကျင်းပသည်။
ကတ္တရာလမ်းအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဦးခွန်ရဲထွေး၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးအာကာလင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက် လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးခင်သက်၊ Robust Goal Group of Companies မှဒါရိုက်တာဦးသက်ဦးတို့မှ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက အမွှေးနံသာရည်များ ပက်ဖျန်းပေးကြသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ကတ္တရာလမ်းအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပြီး အစီအစဉ်အရ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြည်သူတို့ လူနေမှုဘဝများ တိုးတက်မြင့်မားရေးမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေကြောင်း၊ မြို့ချင်းဆက်လမ်းများသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဖွံ့ဖြိုးနေပြီးဖြစ်သော်လည်း ကျေးလက်လမ်းများမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းနေသေးသည်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ် ကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့် လက်ရှိအချိန် (၅၀%)သည် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ပြီး(၃၆%)သည် ပွင့်လင်းရာသီ အထိလမ်းများ ဖောက်လုပ်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိနေပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ (၃)နှစ်တာကာလအတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း(၂/၁)မိုင်၊ ကတ္တရာလမ်း (၇၄/၅.၄၄၉)မိုင်၊ ကျောက်လမ်း(၉၄/၀.၅၂၈)မိုင်၊ မြေသားလမ်း(၁၁၁/၃.၄၃၅)မိုင်၊ လမ်းစုစုပေါင်း(၃၀၈/၅.၇၉၁)မိုင်နှင့် ကွန်ကရစ်တံတား (၅၅)စင်း၊ သစ်သားတံတား(၂)စင်း၊ Box Cullvert (၁၇၄)စင်းတို့အား ပြည်နယ်အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲချမှတ်ပေးသည့် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ တောကျယ်ရေပြာအိုင်အဝင်လမ်း ကတတ္တရာလမ်းသစ်(၁/၁)မိုင် အကျယ်(၂၄)ပေရှိ လမ်းအား ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်လမ်းဖွံဖြိုးရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ Robust Goal Grouup of Companies (High Land Road Construction Co.Ltd) မှလူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းအဖြစ် လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်ကျငွေအားဖြင့် (၁၈၅.၅)သန်းကုန်ကျခဲ့ပြီး ကျေးရွာ(၁၀)ရွာ၊ အိမ်ခြေ(၂၂၆)အိမ်၊ လူဦးရေ(၁၄၁၉)ဦးကို အကျိုးပြုစေတာဖြစ်ကြောင်း၊ လှူဒါန်း ဆောက်ရွက်ပေးသော Robust Goal Group of Companines(High Land Road Construction Co.Ltd) အားအထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တိုင်းရင်းသားဒေသခံများ ကိုယ်စားပြောကြားလိုကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း များအောင်မြင်စေရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ကြသော ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးခင်သက်မှ ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ကျေးလက်နေပြည်သူများ သွားလာမှုလွယ်ကူစေရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ကျေးလက်လမ်း(၁၁၁၆၂.၄၅၉)မိုင် ဖောက်လုပ်ထားပြီး (၃)နှစ်အတွင်း လမ်း(၃၈၀)မိုင်နှင့် တံတား(၁၃၂)စင်းတို့ကို အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ကျေးလက်လမ်းမိုင်ပေါင်း(၅၅၅၀၇)နှင့် တံတား(၂၄၁၈၃)စင်းကို တာဝန်ယူ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိပြီး လမ်းတံတားအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လုပ်ငန်းပမာဏ အလွန်များပြားလွန်းသည့်အတွက် ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များစွာ ရှိပါသေးကြောင်း၊ ကျေးလက်ဒေသများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တည်ဆောက်ပေးထားသည့် ကတ္တရာလမ်းသစ်အား ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ဒေသခံ ပြည်သူများမှ ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးကြရန် ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် Robust Goal Group of Companies ဒါရိုက်တာဦးသက်ဦးမှ တောကျယ်ကျေးရွာ ရေပြာအိုင် အဝင်လမ်း (၁)မိုင် (၁)ဖာလုံ ကတ္တရာလမ်း လှူဒါန်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဌဦးအာကာလင်းက Robust Goal Group of. Companies မှဒါရိုက်တာဦးသက်ဦးအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ကာ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာဦးသက်ဦးမှ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများအား နေရာအရောက်လက်ဆောင် ပစ္စည်းများပေးအပ်၍ ဒေသခံပြည်သူတစ်ဦးက ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားကြောင်း သိရှိရသည်။
နောင်ချို ဒီဇင်ဘာ - ၃
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကျောက်မဲခရိုင် နောင်ချိုမြို့နယ် လုံရုံးကျေးရွာအုပ်စု လောက်ဖန်းကျေးရွာရှိ ငွေရည်ပုလဲ ဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီစက်ရုံသို့ ဒီဇင်ဘာ(၃)ရက် မွန်းလွဲ(၂)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက်ကွင်းဆင်း ကြည့်ရှုကြကြောင်း သိရသည်။
ငွေရည်ပုလဲဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာဦးစိန်မျိုးအောင်က ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းရာ ဒေသခံ ပြည်သူများအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလမ်းတံတားအလှူအဒါန်းကိစ္စရပ်များရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ထိန်းချုပ်မှုခန်းမ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံမှ ထွက်ရှိလာသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဝေပေးသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထိန်းချုပ်မှုအခန်းနှင့် သကြားစက်ရုံတန်ချိန် (၁၂၀၀၀)ကြိတ်ဝါးမည့် အမှတ်(၃) သကြားစက်တည်ဆောက်မည့်နေရာသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ငွေရည်ပုလဲဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီမှ (၁)ရက်ဘိလပ်မြေမှာ တန်ချိန်(၁၀၀၀)+(၄၀၀၀)ကျCrownဘိလပ်မြေတံဆိပ်ဖြင့် (၄၂.၅)နှင့်(၅၂.၅)နှစ်မျိုး ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး ကျောက်မီးသွေးသုံးဘွိုင်လာတာဘိုင်ဖြင့် လျှပ်စစ်(60-MWD)ထုတ်လုပ်ပေး၍ အနီးရှိရွာများကို လျှစ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တရုတ်သံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူးMr. Tan Shufu အဖွဲ့နှင့်လက်ခံတွေ့ဆုံ
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွှန့်လွင်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်တို့နှင့်အတူ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Call ခန်းမတွင် တရုတ်သံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူးMr. Tan Shufu ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် လက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် Mr. Tan Shufu မှ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်သို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမို လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ ယခုလိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ လက်ခံတွေ့ဆုံပေးသည့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်နယ်စပ်ဒေသတွင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ကောင်းများ တွေ့ရှိရပြီး စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါက အသေးစိတ်ဆွေးနွေးလိုကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၁၀) ခုရှိ မြို့နယ် (၃၃) မြို့နယ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ဆောင်မှုများပေးကြောင်း၊ ဆန်ကို တိုက်ရိုက်ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်မှုကို အဓိက ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် စံပြစိုက်ကွင်း စိုက်ပျိုးရန်ရှိပါကြောင်းနှင့် တောင်သူများတုံ့ပြန်မှုရရှိနိုင်ရန် စံပြစိုက်ကွင်းပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလိုစံပြ စိုက်ပျိုးရခြင်းမှာ နည်းပညာများ၊ မျိုးစေ့များပေးပြီး တောင်သူများလည်းဝင်ငွေတိုးကာ ထွက်ရှိလာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို မိမိတို့ဘက်မှ အကုန်ယူပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကပိုးမွေးမြူရေးအိမ်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း၊ ပိုးအိမ်ပျိုးနိုင်ရန် မြေဧကများလိုအပ်ပါကြောင်း၊ မျိုးပေးမည်၊ ပျိုးပေးမည်၊ နည်းပညာများလည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထွက်ရှိ လာသည့် ပိုးကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စက်ရုံတည်ထောင်နိုင်ရန် ရေနှင့်လျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ယခုလို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါကြောင်း နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးမှ ရှင်းလင်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သဖြင့် မိမိတို့မှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေသေးသောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံကို အမီလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြည်သူလူထု အတွက်ဘေးရန်ကင်းသော အစားအစာဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ စပါး၊ ပဲပုပ်၊ ကော်ဖီ စသည့် အသင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ချိတ်ဆက် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တောင်သူနှင့်ယုံကြည်မှုရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလိုလာရောက် ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက် ဝမ်းသာပါကြောင်းနှင့် တောင်သူများအဆင်ပြေစေရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစား ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
(၃/၂၀၁၉-၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက် စက်မှုကုန်ကြမ်း သစ်လုံး/ခွဲသား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကြေညာခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေ ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါဖွင့်လှစ်
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ် ၂၀၁၉ ကျင်းပ